.မိပြန်ပါပြီ ကေတီဗီ မင်္ဂလာဒုံမှာပါ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ပါပဲ၊ အခုထိ အမှတ်မရှိကြသေးပါဘူး. – Askstyle
.မိပြန်ပါပြီ ကေတီဗီ မင်္ဂလာဒုံမှာပါ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ပါပဲ၊ အခုထိ အမှတ်မရှိကြသေးပါဘူး.
မိပြန်ပါပြီ ကေတီဗီ မင်္ဂလာဒုံမှာပါ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ပါပဲ၊ အခုထိ အမှတ်မရှိကြသေးပါဘူး..
ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်က “တော်ဝင်နန်း” ကေတီဗီဆိုင်ကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြင့် အရေးယူလိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါသည်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဖောက်ဖျက်လျက် ကေတီဗီဆိုင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေသည့်အတွက် အရေးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့က ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ အချိန်က မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြံ့မြို့၊ ဧကရာဇ်ရပ်ကွက်ရှိ ဦးကျော်ဦး ပိုင်ဆိုင်သော “တော်ဝင်နန်း” ကေတီဗီဆိုင်ကို ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း ဆိုင်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ အဆိုပါ ကေတီဗီဆိုင်၌ ၎င်းရပ်ကွက်နေ ဆိုင်မန်နေဂျာ သန့်ဇင်ကို (ခ) သန့်ဇင် (၄၁)နှစ်၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်း ကိုဖြိုးအပါအဝင် ၂၃ ဦးနှင့် လာရောက်သီချင်းဆိုသူ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ညောင်နှစ်ပင်ကျေးရွာနေသူပါ ၂၂ ဦး တို့အား တွေ့ရှိရပါသည်။
ဆိုင်မန်နေဂျာ သန့်ဇင်ကို (ခ) သန့်ဇင်နှင့် ဦးကျော်ဦးတို့ ၂ ဦးအား ထောက်ကြန့် မြို့မရဲစခန်း (ပ)၁၂/၂၀၂၁၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်း ကိုဖြိုးပါ ၂၃ ဦးနှင့် လာရောက်သီချင်းဆိုသူ —ပါ ၂၂ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၅ ဦးတို့အား ထောက်ကြန့်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၁၃/၂၀၂၁၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(က) ဖြင့် လည်းကောင်း အသီးသီး အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါသည်။
မိျပန္ပါၿပီ ေကတီဗီ မဂၤလာဒုံမွာပါ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ပါပဲ၊ အခုထိ အမွတ္မရွိၾကေသးပါဘူး..
ရန္ကုန္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္က “ေတာ္ဝင္နန္း” ေကတီဗီဆိုင္ကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒျဖင့္ အေရးယူလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါသည္။
ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လ်က္ ေကတီဗီဆိုင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆိုသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္က မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ႀကံ့ၿမိဳ႕၊ ဧကရာဇ္ရပ္ကြက္ရွိ ဦးေက်ာ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ “ေတာ္ဝင္နန္း” ေကတီဗီဆိုင္ကို ကိုဗစ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ဆိုင္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းသတင္းအရ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အဆိုပါ ေကတီဗီဆိုင္၌ ၎ရပ္ကြက္ေန ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ သန႔္ဇင္ကို (ခ) သန႔္ဇင္ (၄၁)ႏွစ္၊ ဆိုင္ဝန္ထမ္း ကိုၿဖိဳးအပါအဝင္ ၂၃ ဦးႏွင့္ လာေရာက္သီခ်င္းဆိုသူ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေက်း႐ြာေနသူပါ ၂၂ ဦး တို႔အား ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ သန႔္ဇင္ကို (ခ) သန႔္ဇင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဦးတို႔ ၂ ဦးအား ေထာက္ၾကန႔္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၁၂/၂၀၂၁၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္ဝန္ထမ္း ကိုၿဖိဳးပါ ၂၃ ဦးႏွင့္ လာေရာက္သီခ်င္းဆိုသူ —ပါ ၂၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးတို႔အား ေထာက္ၾကန႔္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၁၃/၂၀၂၁၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ ၃၀(က) ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီး အမႈဖြင့္အေရးယူထားသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါသည္။